I-AnkerWork B600 ikhamera yewebhu yokusasaza kunye nokunxibelelana ngomnxeba [Jonga kwakhona] | Izixhobo zeNdaba
UMiguel Hernandez | 01/05/2022 18:00 | ngokubanzi, Reviews
U-Anker uyaqhubeka nokusebenzela ukubonelela ngobuninzi bezinye iindlela kunye neenketho ngendlela yezixhobo kuzo zonke iintlobo zabasebenzisi, nokuba kukunye neetshaja zeMagSafe, izixhobo kwaye, ewe, kunye neekhamera zewebhu, elinye lamasebe ayo apho liqaqamba kakhulu kwiinketho kunye nezixhobo. umgangatho abawunikelayo, Yiyo loo nto ngesi sihlandlo sibuyela kwingqushu kwakhona ngemveliso yolu hlobo.
Sihlalutya nzulu ikhamera yewebhu ye-AnkerWork B600, isixhobo esenzelwe ukunxibelelana ngomnxeba kunye nokusasaza, ngokukhanya, imakrofoni kunye nezithethi. Ungayiphosi kuba ibekwe njengenye indlela enika umdla yokuphucula imveliso yakho.
3 Ukufakwa kunye nesoftware enokwenziwa ngokwezifiso
4 kusetyenziso lwemihla ngemihla
Le khamera intsha ye-Anker ifumana ilifa loyilo loxande oluneekona ezingqukuva esizibonayo kwizixhobo zayo zangaphambili. Nangona kuyinyani ukuba, njengakuyo yonke "unboxings" ka-Anker, umgangatho ubonwa ukusuka kumzuzu wokuqala kwinqanaba lokwakha, nakwizincedisi ezinje ngeentambo. Sinendawo yangasemva apho sifumana izibuko ezimbini ze-USB-C, eziyimfuneko kumandla kunye nokuhanjiswa komfanekiso, kunye ne-USB-A izibuko eya kusebenza njengedokhi.. Ngokwenxalenye yayo, indawo ejikelezileyo yenziwe nge-textile, ukuze ikhuphe ngokuchanekileyo isandi sezithethi zayo ezidibeneyo.
Sinesiseko seselula esivumela ukuba silungelelanise ikhamera yewebhu phezulu kuyo nayiphi na isikrini, kwaye sinokungena kwisiseko esisezantsi naluphi na uhlobo lwenkxaso eqhelekileyo yeefowuni eziphathwayo okanye iikhamera, kunjaloOlu lukhetho endilukhethileyo kuba andizukuba nalo ngokusisigxina kwiscreen.
Inxalenye yangaphambili yeyokukhanya kwe-LED evula ngehenjisi kwaye ikhusela i-lens. Emacaleni sinamaqhosha amabini okuchukumisa imakrofoni kunye nokukhanya, into esinokuyilawula kwakhona kwisicelo ngokwaso.
Le khamera inen 2K isivamvo sesisombululo esiphezulu nangona sinokuyihlengahlengisa ngokweemfuno zethu, ewe, ngezakhono ze Imifanekiso engama-30 ngomzuzwana, nangona ingekuko ukuba sifuna ngaphezulu kokusebenza okanye ukusasaza. Ubungakanani be-sensor yi-1 / 2.8 intshi kwaye inesistim sokuvezwa ngokuzenzekelayo, inkqubo yokulinganisa emhlophe ngokuzenzekelayo, ugxininiso oluzenzekelayo kunye nomsebenzi wokubona umntu kunye nokulandelela umkhondo, akukho nto kwaye akukho nto ingaphantsi.
Kwelinye icala sinayo iimakrofoni ezine zokujonga kabini kunye nezithethi ezibini ze-2W nganye Ukunikezela ngesandi esicacileyo se-stereo xa kufikwa kwiincoko, zonke nge-Auto Echo Cancellation kwaye ngokuqinisekileyo ukucinywa kwesandi kwiifowuni, ukuvumela kuphela ilizwi ukuba liviwe. Sigqibe kwelokuba le AnkerWork B600 ixhotyiswe kakuhle kwinqanaba lobuchwephesha, nangona siza kuthetha malunga nokusebenza kwayo ngexesha lokwenyani kamva.
Ukufakwa kunye nesoftware enokwenziwa ngokwezifiso
Ngokwenene, le Anker AnkerWork B600 Iplagi kunye nokudlala, Ngale nto ndithetha ukuba izakusebenza ngokuchanekileyo kuphela ngokudibanisa nezibuko USB-C kwikhompyuter yethu. Inkqubo yayo yobukrelekrele bokwenziwa kunye nezakhono ze-autofocus kufuneka zanele kumhla wethu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba nesoftware yenkxaso, kule meko sithetha ngayo AnkerWork onokuzikhuphelela simahla, kuyo siza kufumana ukhetho oluninzi, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu yinto enokwenzeka yokuhlaziya isoftware ye-webcam kwaye ke yongeze inkxaso yayo.
Kule software Siza kukwazi ukulungelelanisa ii-engile ezintathu zokubukela ze-68º, 78º kunye ne-95º, kunye nokukhetha phakathi kweempawu ezintathu zokubamba phakathi izigqibo ezahlukeneyo Ukuhamba ngamathuba okuhlengahlengisa i-FPS, ukwenza nokungasebenzi kugxilwe, i eye kunye Umsebenzi weAnti-Flicker umdla kakhulu xa sikhanyiswa iibhalbhu ze-LED, uyazi ukuba kwezi meko i-flickers idla ngokuvela enokucaphukisa, into esiya kuyiphepha ngokuphawulekayo. Ngaphandle kwayo yonke into, siya kuba neendlela ezintathu ezingagqibekanga ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu ethi ithiyori ifumane okuninzi kwi-AnkerWork B600 ka-Anker.
Sicebisa ukuba uthathe isigqibo malunga nale khamera ifumaneka kwiwebhusayithi yeAnker nakwiAmazon, ukuba ukhawuleza ukufaka i-Anker Work kwaye uthathe ithuba lokuhlaziya i-firmware yekhamera.
kusetyenziso lwemihla ngemihla
Le khamera iphumelele amabhaso amabini kwi-CES 2022 kwaye ichanekileyo kuba sijongene ne "All-in-One", isixhobo esikwaziyo ukunciphisa inani le "clunkers" esinalo kwidesika yethu enkosi ngokuzihlanganisa zonke. enye enye. Ukongeza, isebenza ngokuchanekileyo kuzo zonke iindawo, ngale ndlela, Iye yaba yikhamera yethu engagqibekanga ye-iPhone News Podcast yeveki apho sabelana ngolwazi malunga neziganeko zangoku kwihlabathi letekhnoloji ngokubanzi.
Kulapho ibonise khona ubuchule bayo, ngakumbi ngenxa yenkqubo yokukhanyisa i-LED esiya kukwazi ukuphumelela phakathi kweethoni ezibandayo kunye nezifudumeleyo, kuba le nto sisandula ukuyikhankanya yiyona nto yokukhanyisa kuphela esetyenzisiweyo.
Ikhamera ineVoiceRadar Kwimeko apho sithatha isigqibo sokusebenzisa ii-microphone zayo, oku akukho nto ngaphandle kwenkqubo yokucima ingxolo yangaphandle ecacisa ukusebenza komnxeba kwaye kwiimvavanyo zethu zibonakaliswe ukuba zisebenza kakhulu ekupheliseni ingxolo yangasemva kunye nokugxila kuphela kwi-interlocutors. .
Ukongeza, ikhamera inesistim isakhelo kuphela, engeyonto ngaphandle kokulandelelana okuthe ngqo komntu, ehlala ebagcina ephambili. Kwiimvavanyo zethu, kuboniswe ukuba kusebenza kakuhle kakhulu kwinqanaba lokugxila kunye nokulandelelana ngokwalo, into esiyiqaphele ekuphuhliseni imisebenzi.
ungenza ngayo I-AnkerWork B600 iqala kwi-euro ezingama-229 kwiwebhusayithi ye-Anker, okanye ngokuthe ngqo nge-Amazon, nangona uya kuyifumana kwezinye iindawo eziqhelekileyo zokuthengisa.
Ngale ndlela, ibekwe njengenye yeekhamera ezigqibeleleyo neziguquguqukayo ze-All-in-One kwimarike kwaye kwi-Actualidad Gadget asinakwenza nantoni na ngaphandle kokuyicebisa.
Ithunyelwe nge: Meyi 1 ye2022
Utshintsho lokugqibela: Meyi 1 ye2022
Ukuguquguquka kunye neempawu
Kufuneka ibandakanye indawo yokukhaba
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-AnkerWork B600 ikhamera yewebhu yokusasaza kunye nokunxibelelana ngomnxeba [Jonga kwakhona]
I-Doogee S98 Pro: ikhamera enenzwa ye-thermal kunye noyilo lwangaphandle